टप नेपाली जोक्स – Top Nepali Jokes – Page6– MeroJilla.com
चुडकिला – विवाहको पहिलो रात Sunday, March 27th, 2016
विवाहको पहिलो रात। दुलहीको मनको ढुकढुकी बढीरहेको थियो। दुलहा कोठामा पस्यो। ढोका लगायो। दुलहीको मन झन ढक्क फुल्य। दुलहाले पर्दा सबै बन्द गर्यो। अनी बत्ती निभायो। बिस्तारै खाटमा आयो अनी दुलहीको नजिक आएर भन्यो, “एउटा कुरा देखाँउ?” दुलहीले मुन्टो हल्लाएर हुन्छ भनी। दुलहाले सिरक भित्र लग्यो अनी खुसुक्क भन्यो, “यी हेर त बत्ती बल्ने..
चुडकिला – तिम्रो र मेरो बिहे होला जस्तो छैन
केटा : तिम्रो र मेरो बिहे होला जस्तो छैन । केटी : किन ? केटा : म हिजो तिम्रो घर गएको थिएँ केटी : के मेरो बाबासँग भेट भयो ? केटा : होईन तिम्रो बहिनिसँग भेट भको थियो..
चुडकिला – कहाँ पुलिस ले समात्नु नि आफै समात्नु पर्छ
चुडकिला – बाबु केहि पनि भएन भने Try गरिरहनुस न Thursday, February 11th, 2016
१८ बर्षकी कुमारी केटी pregnent भइन ! उस्की आमा रिसले चुर भएर' को हो त्यो नालायक'भन्दै नानाभाती गाली गर्यो । ३० मिनेट पछी उस्को गेटमा एउटो कालो चिल्लो गाडी चिट्ट मिलेका टाइ सुट लाएको मान्छे आएर आमा संग सोध्यो । मैले सुने अनुसार तपाइको छोरी pregnent भइन रे । अब सासु आमा जि म तपाइको छोरिलाई बिहे गर्न त सक्दिना तर तपाइकी छोरीले छोरी पाइ भने म १ करोड अनि एउटा घर दिनेछु । या..
चुडकिला – नोकर्नीले कप खसाली छे
शेरेको नोकर्नीले कप खसाली छे । शेरेको बुढीः"तलाई नखरमौली । त्यति कप समाउन नि सकिनेस्?" त्यो कुरा सुनेर छोरोले भनेछः"आमा नखरमौली भनेको के हो?" छोरोलाई नराम्रो कुरा सिकाउनु हुन्न भनेर शेरेको बुढीले भनिछेः"बाबु नखरमौली भनेको बलियो हो । " फेरि अर्को दिन पनि नोकर्नीले कप खसाली छे । शेरेको बुढीः"तलाईँ रण्डी आज पनि कप फुटाइस् ।" छोरोः"आमा रण्डी भनेको के हो?" शेरेको बुढीः"कमजोर हो..
चुडकिला – शेरे: 1 मिनेट पर्ख
लोभी शेरेसँग पैसा फुत्काउनलाई बुढीले भनिछे बुढी: हाम्रो बिहे भएको 10 वर्ष भएछ । तिम्लाई यो 10 वर्ष कति जस्तो लाग्यो ? शेरे: 1 मिनेट । बुढी: अनि तिम्रो लागि 10 हजार रुपैया कति हो ? शेरे: 1 रुपैया । बुढी: त्यसोभए 1 रुपैया लेउ न त । . . . शेरे: 1 मिनेट पर्ख..
चुडकिला – भगवान धन्न गाई भैसिलाई चाही उड्ने बनाउनु भएन Tuesday, December 22nd, 2015
एकदिन माग्ने बुढा बजारबाट घर तिर फर्कदै थिए । बिच बाटोमा पुगेपछी उसको टाउकोमा माथि उडिरहेको एउटा भगेराले उसको टाउको मा आची गरेछ यो देखेर निरास भएको माग्ने बुढाले माथि तिर हेर्दै भनेछन, "भगवान तपाईंलाई लाख लाख नमस्कार तपाईंले धन्न गाई भैसिलाई चाही उड्ने बनाउनु..
चुडकिला – साले! मरो भागमा राँगो पारीदीइस
एक पटक विश्व भैंसी दुहुने प्रतियोगित भएछ। ओबामाले १५ लिटर, रजनीकान्तले १६ लिटर, गद्दाफिले १४ लिटर दुध दुहेछन, हाम्रा राजेश हमालले जम्मा २ लिटेर मात्र दुहेछन, निर्णायकले सोधेछ -"जम्मा २ लिटेर मात्र?" राजेश हमालले रिसाउदै भनेछ -"साले! मरो भागमा राँगो..
चुडकिला – नोकरनी : मालिकलाई मेरो साथ लैजाउँ ? Sunday, November 22nd, 2015
नोकरनी : मालिक्नी साहेब मलाई दश दिनको छुट्टि चाहियो मालिक्नी : तिमी दश दिनको छुट्टिमा गयौँ भने तिम्रो मालिकको टिफिन कसले बनाउँछ ? .................. ................... उनलाई दबाई कसले दिन्छ ? उनको कपडा कसले धुन्छ, प्रेस कसले गर्छ ? उनको विस्तारा कसले लगाउँछ ? उनको शर्टको टुटेको टाँक कसले लगाउँछ ? नुहाएर बाथरुमबाट निक्लँदा, टाबेल टाबेल भनेर चिच्याउँदा, उनलाई टाबेल खोजेर कसले दिन्छ ? उनको मोबाइल, चश्मा,..
चुडकिला – देवि माता यि दुवैजनालाई फेरि कालो बनाइदिनुस Friday, November 20th, 2015
तीनजना साथिहरु बाटोमा हिडिरहेका थिए । उनीहरु तिनैजना काला थिए । अकस्मात उनीहरुका अगाडि देवि प्रकट भइन । देविले भनिने तिमीहरु जे माग्छौ त्यहि दिन्छु भन पहिलो– देवि माता मलाइ गोरो बनाइदिनुस । दोश्रोः देविमाता मलाई पनि गोरो बनाइदिनुस । ती दुवैले गरेको अनुरोधले देवि खुसी भएर गोरो हुने बरदान दिइछन् । जव तेश्रोले बरदान माग्ने बेला भयो तब उसले भन्यो “ यि दुवैजनालाई फेरि कालो..
चुडकिला – १० बर्ष अगाडि रिजेक्ट
श्रीमान श्रीमती सँगै बसिरहेका थिए । त्यत्तिकैमा श्रीमतीले भनिन् हेर्नुस त त्यो मान्छे रक्सी खाएर बाटोमा कसरी मात्तिएको छ । मैले उसलाई १० बर्ष अगाडि रिजेक्ट गरिदिएकी थिए । श्रीमान :हेर अझै पनि रमाएर खुसी मनाइरहेको छ..